ဂျွန်ဆင်နှင့် ဘိုင်ဒန် တွေ့ဆုံစဉ် ဗြိတိန်နှင့် အမေရိကန် ခရီးသွားလာမှု ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေး လုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူ - Xinhua News Agency
ဗြိတိန်နိုင်ငံ Cornwall မြို့ Carbis Bay တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင် (ယာ)နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့ ဇွန် ၁၀ ရက်က တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Andrew Parsons/No 10 Downing Street/Handout via Xinhua)
FALMOUTH ၊ ဗြိတိန်၊ ဇွန် ၁၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့သည် Group of Seven (G7) ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်မီတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ဇွန် ၁၀ ရက်က နှစ်နိုင်ငံကြား ခရီးသွားလာမှု ပြန်လည်စတင်ရေး လုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူခဲ့ကြသလို အတ္တလန်တိတ်ပဋိညာဉ်အသစ်အား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ Cornwall မြို့ Carbis Bay တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင် (ဝဲ) နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့ ဇွန် ၁၀ ရက်က စကားပြောဆိုနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Andrew Parsons/No 10 Downing Street/Handout via Xinhua)
ဗြိတိန်နိုင်ငံ Cornwall မြို့ Carbis Bay တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင် (ယာဘက်ဒုတိယမြောက်) နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန် (ဝဲဘက် ဒုတိယမြောက်) တို့ ဇွန် ၁၀ ရက်က မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Andrew Parsons/No 10 Downing Street/Handout via Xinhua)
ဗြိတိန်နိုင်ငံ Cornwall မြို့ Carbis Bay တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင် (ယာဘက်ဒုတိယမြောက်) နှင့် ဇနီး Carrie Symonds (ယာဘက်ပထမ) နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန် (ဝဲဘက် ဒုတိယမြောက်) နှင့် ဇနီး Jill Biden (ဝဲဘက်ပထမ) တို့ လမ်းလျှောက်နေကြသည်ကို ဇွန် ၁၀ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Andrew Parsons/No 10 Downing Street/Handout via Xinhua)
ဗြိတိန်နိုင်ငံ Cornwall မြို့ Carbis Bay တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင် (ယာ) နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်နေသည်ကို ဇွန် ၁၀ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Andrew Parsons/No 10 Downing Street/Handout via Xinhua)
“သူတို့က ခရီးသွားလာမှု ပြန်ဖွင့်ရေး လုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့မှုလျော့ပါးရေးကူညီဖို့ အချက်အလက်တွေ ဆက်လက်မျှဝေကြဖို့ သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်” ဟု ဗြိတိန်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း Cornwall မြို့ရှိ Carbis ပင်လယ်အော် ကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် ထုတ်ပြန်လိုက်သော ကြေညာချက်တွင် ဒေါင်းနင်းလမ်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြားခဲ့သည်။
နှစ်နိုင်ငံတို့သည် ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဝင်စတန်ချာချီ (Winston Churchill) နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတဟောင်း ဖရန်ကလင် ရုစ်ဗဲ့ (Franklin Roosevelt) တို့က ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သော မူရင်းအား ထပ်မံချုပ်ဆိုခဲ့သော အတ္တလန်တိတ်ပဋိညာဉ်အသစ်မှတစ်ဆင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နက်ရှိုင်းစေရန် သဘောတူခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ ပဋိညာဉ်အသစ်တွင် တရားမဝင်ငွေကြေး၊ အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခနှင့် အစွန်းရောက်မှု၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါကဲ့သို့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းများ အပါအဝင် ခေတ်သစ် ခြိမ်းခြောက်မှုများအား ဖော်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
အစည်းအဝေးအတွင်း ဘိုင်ဒန်နှင့် ဂျွန်ဆင်တို့သည် မြောက်အိုင်ယာလန်အရေးဆိုင်ရာ မတူကွဲပြားမှုများအား အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် မှန်ကန်သော ဖြေရှင်းချက်အား ရှာဖွေမတွေ့ရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
“အီးယူနဲ့ ယူကေ နှစ်ခုလုံးက မြောက်အိုင်ယာလန်၊ ဗြိတိန်နဲ့ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတို့ကြား လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်ရေးကို ခွင့်ပြုရန်အတွက် လက်တွေ့ကျသော ဖြေရှင်းနည်းများကို အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ရှာဖွေရန် တာဝန်ရှိကြောင်း ခေါင်းဆောင်များ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်” ဟု ဒေါင်းနင်းလမ်း ကြေညာချက်က ပြောခဲ့သည်။
ဗြိတိန် အစိုးရအနေဖြင့် ဂရိတ်ဗြိတိန်မှ မြောက်အိုင်ယာလန်သို့ ထုတ်ကုန်အချို့ တင်သွင်းမှုများအပေါ် အိုင်းရစ်ပင်လယ်နယ်စပ် စစ်ဆေးမှုများတွင် အကောက်ခွန်များဆိုင်ရာ ထပ်တိုးသက်တမ်းကာလအား တစ်ဖက်သတ် တိုးမြှင့်နိုင်သည့် အလားအလာရှိပြီး ယင်းအပေါ် EU ကလည်း လက်တုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားထားသည်။
G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအား ဇွန် ၁၁ ရက်မှ ၁၃ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဆန္ဒပြမည့်အဖွဲ့များကလည်း ဆန္ဒပြမှုများစွာ လုပ်ဆောင်ရန် ကြေညာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-06-11 05:46:15|Editor: huaxia
FALMOUTH, Britain, June 10 (Xinhua) — British Prime Minister Boris Johnson and U.S. President Joe Biden on Thursday agreed to work to resume travel between the two countries and signedanew Atlantic Charter, as they met ahead of the Group of Seven (G7) summit.
The G7 summit will be held from Friday to Sunday, and protest groups have announced multiple protests. Enditem
1- British Prime Minister Boris Johnson (R) meets with U.S. President Joe Biden in Carbis Bay, Cornwall, Britain, on June 10, 2021. Boris Johnson and Joe Biden on Thursday agreed to work to resume travel between the two countries and signedanew Atlantic Charter, as they met ahead of the Group of Seven (G7) summit. (Andrew Parsons/No 10 Downing Street/Handout via Xinhua)
2- British Prime Minister Boris Johnson (L) talks with U.S. President Joe Biden after their meeting in Carbis Bay, Cornwall, Britain, on June 10, 2021. Boris Johnson and Joe Biden on Thursday agreed to work to resume travel between the two countries and signedanew Atlantic Charter, as they met ahead of the Group of Seven (G7) summit. (Andrew Parsons/No 10 Downing Street/Handout via Xinhua)
3- British Prime Minister Boris Johnson (2nd R) poses with U.S. President Joe Biden (2nd L) in Carbis Bay, Cornwall, Britain, on June 10, 2021. Boris Johnson and Joe Biden on Thursday agreed to work to resume travel between the two countries and signedanew Atlantic Charter, as they met ahead of the Group of Seven (G7) summit. (Andrew Parsons/No 10 Downing Street/Handout via Xinhua)
4- British Prime Minister Boris Johnson (2nd R) and his wife Carrie Symonds (1st R) walk with U.S. President Joe Biden (2nd L) and his wife Jill Biden (1st L) in Carbis Bay, Cornwall, Britain, on June 10, 2021. Boris Johnson and Joe Biden on Thursday agreed to work to resume travel between the two countries and signedanew Atlantic Charter, as they met ahead of the Group of Seven (G7) summit. (Andrew Parsons/No 10 Downing Street/Handout via Xinhua)
5- British Prime Minister Boris Johnson (R) poses with U.S. President Joe Biden in Carbis Bay, Cornwall, Britain, on June 10, 2021. Boris Johnson and Joe Biden on Thursday agreed to work to resume travel between the two countries and signedanew Atlantic Charter, as they met ahead of the Group of Seven (G7) summit. (Andrew Parsons/No 10 Downing Street/Handout via Xinhua)